Shina mpamokatra sy masinina any Machine | Mestech
Sombiny masininamandrafitra ny singa fototra amin'ny fitaovana mekanika sy fitaovana isan-karazany. Ny fitaovana sy ny fizotrany ampiasainy dia mampifangaro ny ambaratonga avo indrindra amin'ny famolavolana ny milina ankehitriny, ny fitaovana, ny fandorana, ny milina, ny elektronika, ny fifehezana indostrialy ary ny sehatra hafa.
Miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojia, ny ampahany mazava tsara sy ny milina dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famokarana indostrialy maoderina. MESTECH dia nanome ny mpanjifa fanodinana mazava ny vy sy ny faritra tsy vy nandritra ny taona maro.
Inona no andraikitry ny ampahany metaly amin'ny indostria maoderina?
Fitaovana milina no "Masinina reny indostrialy" . Saika ny fanamboarana fitaovana mekanika rehetra dia tsy afa-misaraka amin'ny fikirakirana mekanika. Miaraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny teknolojia sy ny fitaovana, misy ny fangatahana lehibe ho an'ny faritra marina, toy ny fiaramanidina, aerospace, fiara, mpitsabo, faharanitan-tsaina artifisialy ary ny famokarana puce, izay tsy azo sarahina amin'ny fanohanan'ny faritra marina. Ahoana ny fomba hahatratrarana ny fanamboarana haingam-pandeha avo lenta ary ampahany amin'ny indostrian'ny famokarana milina.
Fizarana avo lenta
Firy amin'ireo karazana fizotran'ny milina no fantatrao?
Ny famaritana mazava tsara dia dingana iray hanovana ny habe na ny fahombiazan'ny workpiece amin'ny alàlan'ny masinina fanodinana. Araka ny maripanan'ny mari-pana eo amin'ilay sangan'asa, dia azo zaraina amin'ny fanodinana mangatsiaka, fanodinana mafana ary fanodinana manokana. Amin'ny ankapobeny dia voahodina amin'ny hafanan'ny efitrano izy ary tsy miteraka fiovan'ny zavatra simika na ara-batana. Antsoina hoe fanodinana mangatsiaka izy io. Amin'ny ankapobeny, ny fanodinana amin'ny mari-pana na ambany ny mari-pana dia miteraka fanovana simika na ara-batana amin'ny workpiece, izay antsoina hoe fanodinana hafanana. Ny fanodinana mangatsiaka dia azo zaraina amin'ny fanodinana sy fanodinana tsindry araky ny tsy fitovian'ny fomba fanodinana. Ny fitsaboana hafanana, ny forging, ny casting ary ny welding dia mahazatra amin'ny asa mafana. Ny fanapahana marina dia matetika no rohy fanodinana farany hahazoana antoka ny maha-marina ny ampahany, ary izy io koa no rohy misy ny asa lehibe indrindra, manao mihoatra ny 60% ny fikirakirana ny faritra mekanika.
Inona no atao hoe fanapahana mekanika?
Ny fanapahana mekanika no fomba lehibe indrindra fanodinana mekanika, manondro ny fizotry ny fanesorana ireo fitaovana amin'ny alàlan'ny milina marina.
Ny fanapahana mekanika mazava tsara dia karazana masinina fanodinana misy fatra marina. Misy fomba roa lehibe hahitana ny fametahana ny masinina amin'ny ampahany:
(1) Ny iray dia ny fampiasana fitaovana milina avo lenta handefasana ireo faritra avo lenta, toy ny mandrindra milina mankaleo, milina kofehy, mpangaroharo kankana, mpihosin-koditra, grinder optique, grinder ivelany mihosin-drakitra, mpitrandraka hob avo lenta, avo -Fanapahana kofehy voafantina, sns. Ireo fitaovana masinina ireo dia fitaovana milina manokana avo lenta, ampiasaina manokana amin'ny fanodinana karazana faritra manokana, toy ny fitaovana, turbine, visy, fitaovana fanapahana, vatan-kazo fampitaovana avo lenta ary boaty maotera, sns. Ireo fitaovana masinina ireo dia mahomby sy marina tokoa amin'ny fikarakarana tanjona manokana.
(2) Ny faharoa dia ny fampiasana ny teknolojia fanonerana lesoka hanatsarana ny fanodinana ny ampahany. Ny fitaovana milina fanaraha-maso lehibe indrindra dia ny milina fanodinana CNC, ny lathe CNC, ny grinder CNC, ny milina fanamafisana ary ny fikosoham-bary ary ny ivon-toeran'ny milina.
Ny fitaovana milina CNC amin'ny ankapobeny dia fitaovana milina tanjona ankapobeny, noho ny fampiasana teknolojia fandefasana solosaina, azo alamina mialoha amin'ny fikirakirana ny solosaina sy ny debugging, manana mifanentana tsara sy mahay mampifanaraka, mety amin'ny endrika sarotra, karazana fanodinana isan-karazany. Ny fitaovana milina CNC dia lafo, saingy afaka mahatsapa ny mandeha ho azy ny fikarakarana izy ireo, ary manana ny fahamendrehana fanodinana miverimberina sy ny fahombiazan'ny famokarana.
Ahoana ny fomba hisafidianana ireo fitaovana fanodinana mety?
Miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojia fanaraha-maso solosaina, fitaovana milina maro dia maro no ampifandraisina amin'ny rafitra CNC, mba hahatsapany fa mandeha ho azy ny fikarakarana, hialana amin'ny hadisoana amin'ny asa tanana, ary hanatsara ny fahamendrehana sy ny fitoniana. Noho izany, ny fitaovana milina CNC dia be mpampiasa eo amin'ny sehatry ny famokarana ampahany.
(1) Ny fanodinana cnc fametrahana ny vy tsara dia avo, miaraka amin'ny kalitaon'ny fikirakirana azo antoka;
(2) Izy io dia afaka manao rohy mirindra sy mandrindra faritra misy endrika tsy mikorontana.
(3) Rehefa ovaina ny ampahany amin'ny hardware an'ny CNC, ny programa NC ihany no mila ovaina mba hamonjy ny fotoana fanomanana ny famokarana.
(4) Ny fitaovan'ny milina dia manana mari-pahaizana avo lenta ary henjana, ary afaka misafidy ny habetsahan'ny fanodinana mahasoa, ary avo ny taham-pivoarana (amin'ny ankapobeny 3 ka hatramin'ny 5 heny noho ny an'ny milina ankapobeny).
(5) Ny fitaovana milina dia mandeha ho azy ary afaka mampihena ny hamafin'ny asa.
Ny fanodinana tsara an'i CNC amin'ny fampiasana fitaovana fanapahana fohy no tena mampiavaka ireo faritra enti-miasa tsara. Ny mpikapa fohy dia afaka mampihena be ny fihenan'ny fitaovana ary avy eo mahatratra kalitao ambonimbony, misoroka ny famerenana amin'ny laoniny, mampihena ny fampiasana kibay, ary mampihena ny fotoana fikarakarana EDM. Rehefa mandinika ny milina famaky dimy, ilaina ny mandinika ny fotokevitra amin'ny fampiasana ny famolavolana famaky dimy: mba hamenoana ny fanodinana workpiece iray manontolo miaraka amin'ny fitaovana fanapahana fohy indrindra araka izay tratra, fa koa hampihenana ny fandaharana, ny fametahana ary ny fotoana fanodinana. hahazoana kalitao ambonimbony kokoa.
Ahoana ny fomba hanaovana teknolojia fanodinana antonony?
(1) Dingana fanodinana henjana. Mba hialana amin'ny ankamaroan'ny karama fanodinana isaky ny sehatry ny fanodinana ary hametrahana mari-pahaizana mazava dia ny fanatsarana ny vokatra hatrany araka izay azo atao.
(2) Dingana famaranana. Esory ny lesoka mety hitranga aorian'ny fanodinana henjana, miomana amin'ny famitana ny fisehoana, takiana ny hahatratra ny fahamendrehan'ny fanodinana takiana, hiantohana ny karama farany ilaina ary hamarana miaraka ny fanodinana faharoa.
(3) Dingana famaranana. Amin'ity dingana ity, ny hafainganam-pandeha lehibe, ny fahana kely ary ny halalin'ny fanapahana dia voafantina mba hanesorana ny vola fanampiana farany navelan'ny fizotrany teo aloha mba hahafahan'ny endrik'ireo ampahany mahafeno ny fepetra teknika amin'ny sary.
(4) Drafitra famokarana Ultrafine. Ampiasaina indrindra hampihenana ny sandan'ny fahasarotan'ny tany na hanamafisana ny fisehoan'ny fanodinana. Ampiasaina indrindra izy io amin'ny fanodinana ny tany miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fahamendrehana ambonimbony (ra <0.32 um).
(5) Dingana fanodinana tena tsara. Ny fahamendrehan'ny masinina dia 0,1-0,01 micron ary ny hasarobidin'ny toetran'ny RA dia latsaky ny 0,001 micron. Ny fomba fanodinana lehibe dia: fanapahana tsara, fitotoan'ny fitaratra, fikosoham-bolo ary fanosorana tsara.
Ahoana ny fomba hisafidianana ireo fitaovana mety amin'ny workpiece?
Ny fanodinana fametahana, fa tsy ny akora rehetra dia mety maniry ny hanao fanodinana araka ny tokony ho izy, ny akora sasany sasany mafy loatra, mihoatra ny hamafin'ny ampahany amin'ny masinina fanodinana, mety hianjera ireo ampahany amin'ny milina, noho izany ireo akora ireo dia tsy mety amin'ny fanodinana mekanika mazava, raha tsy vita amin'ny akora tsy manam-paharoa, na fanapahana laser.
Ny akora ho an'ny milina mazava dia azo zaraina ho sokajy roa, akora vy sy akora tsy metaly.
Raha ny akora vy, ny hamafin'ny vy harafesina dia avo kokoa, arahin'ny vy vy, arahin'ny varahina sy aliminioma malefaka kokoa.
Ny fanodinana seramika sy plastika dia an'ny fanodinana akora tsy metaly.
1. Voalohany indrindra, ny ampahany dia tsy maintsy manana ambaratonga henjana. Ho an'ny rindranasa sasany, arakaraky ny maha avo ny hamafin'ny fitaovana banga no tsara kokoa. Izy io dia voafetra ihany amin'ny fepetra takiana amin'ireo ampahany amin'ny milina. Ireo fitaovana vita amin'ny milina dia mety tsy ho mafy loatra. Raha mafy noho ny faritra namboarina izy ireo, dia tsy azo namboarina.
2. Faharoa, ny fitaovana dia antonony amin'ny hamafiny sy malefaka. Farafahakeliny farafahakeliny farafahakeliny no ambany noho ny an'ireo masinina. Mandritra izany fotoana izany dia miankina amin'ny asan'ny fitaovana voahodina sy ny fisafidianana fitaovana mety ho an'ny faritra masinina.
Raha fintinina dia mbola misy fepetra takiana amin'ny kalitaon'ny fitaovana amin'ny milina mazava tsara, tsy ny fitaovana rehetra no mety amin'ny fikarakarana, toy ny akora malemilemy na mafy, ny voalohany tsy ilaina amin'ny fanodinana, ary ity farany tsy afaka manodina.
Mestech dia manome ny mpanjifa ny famokarana sy ny fanodinana ireo faritra vy mazava. Raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao, mifandraisa aminay.
Previous: Machining CNC
Manaraka: Famolavolana sy famolavolana plastika fitsaboana
Sombin-javatra vita amin'ny varahina
Fitaovana masinina avo lenta
Fanamboarana ny masinina
Ilaina ny milina ilaina
Precision masinina faritra